डा. युवराज खतिवडा , ७ माघ २०७६, मंगलवार, ०७:०९ pm
काठमाडौं । हिजो आज चर्चा गरिन्छ विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । को कता ओरालो लाग्यो । अर्थतन्त्र उकाली ओराली नै हो । यो सधै सिधा लाइनमा मात्रै हिड्दैन् । यो सरल बाटो, तेर्साे बाटो मात्रै हिड्दैन् । यो कहिले अलिकति उकालो चढ्छ, कहिले अलिकति ओरालो लाग्छ ।
हाम्रो भूगोल जस्तो छ अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै हो उकाली ओराली । त्यस कारण अलिकति उकालो चढ्दैमा स्वाँस्वाँ गर्ने, अलिकति ओराली लाग्दैमा लडिन्छ की भन्ने बनावटी कुरा आवश्यक छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्र सोलिड, सुढृढ, सबल र स्थायी मार्गमा अघि बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका साथीहरु, व्यवसायीक क्षेत्रका साथीहरु ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् ।
हामीले भनेको कुरालाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको हो भने अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुका रिपोर्ट पनि हेर्नुस् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आइएमएफ जस्ता निकायहरुले नेपालको अर्थतन्त्रको अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनहरु प्रकाशित गर्छन् । ति पनि पढिदिनु होस् । आइएमएफको आर्टिकल फोरको मिसनले भर्खरै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसमा नेपालको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र एउटा रिमार्केबल पाथ अघि बढिरहेको छ भन्ने त्यसमा लेखिएको छ । विश्व बैंकको इकोनोमिक अपडेटले पनि त्यहि भन्छ । एडिबीको अपडेटले पनि नेपालको अर्थतन्त्र ठिक बाटोमा अघि बढिरहेको छ भनिरहेकै छ ।
हामी राम्रो बाटोमा छौं । आर्थिक वृद्धिबारे कुनै बेला २।३ प्रतिशतका बारेमा बहस हुने गर्दथ्यो । चार भयो भने धेरै हुन्थ्यो । हाम्रो २० वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर नै ४ प्रतिशत हो । अहिलेको बहस आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत की ८ प्रतिशत भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । हाम्रो बहसको स्तर नै माथी उठिसकेको छ । बिसौं वर्षको ४ प्रतिशतको वृद्धिदरलार्ई छोडेर बहस नै ६ प्रतिशत भन्ने भैसकेपछि हामी कहाँ छौं स्पष्ट भैहाल्छ । यसको सिधा अर्थ भनेको हामी अर्थतन्त्रको माथिल्लो चरणमा उक्लिसकेका छौं ।
कुनै बेला मूल्य वृद्धि २२ प्रतिशत हुन्थ्यो । तर त्यतिबेला मूल्य वृद्धिले आकाश छोयो भनिदैनथ्यो । अहिले ६ प्रतिशत हुँदा खेरि चरम मूल्य वृद्धि भन्न थालिएको छ । गत २० वर्षको औषत मूल्य वृद्धि दर चाँही ८ प्रतिशत भन्दा माथी हो । त्यसकारण हाम्रो बहस अब यो भन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ । हामी विगत भन्दा राम्रो गरिरहेका छौं र अझै राम्रो गर्ने ठाउँ पनि छ ।
व्यापार घाटाको कथा लामो गरियो । तर यतिबेला घट्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा धेरै गएर देश वृद्धाश्रम हुने भयो भन्ने थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि ठूलो मात्रामा बढेको छैन् । केहि समय त घटेकै थियो अहिले थोरै मात्रै बढेको छ । हामी वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यालाई असिमित रुपमा बढाउने पक्षमा छैनौं । तर हामीलाई रेमिटेन्स चाँही दोब्बर नै चाहिएको छ रे । अनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या पनि घटाउ अनि रेमिटेन्स पनि दोब्बर बढाउ भन्ने कुरा पनि कहि हुन्छ ?
व्यापार घाटा कम गर, राजश्व पनि एक दमै धेरै संकलन गर । निक्षेपको ब्याज पनि धेरै लिन देउ, कर्जाको ब्याज भरसक कम राख । यस्तो पनि भन्न मिल्छ ? यस्ता कुराले हामी कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्दैनौं । हामीले जहिले पनि वास्तविकताको धरातलमा बसेर अर्थतन्त्रको विवेचना गर्नुपर्छ । यथार्थ सूचकहरुलाई हेरेर बहस गरिनुपर्छ ।
बैंकरहरुले पनि अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि कथंकदाचित थप योगदान गर्नुपर्ने रहेछ भने होस्टेमा हैँसे गर्नुहोस् । नेपालको वित्तिय प्रणाली दक्षिण एसियामा सबै भन्दा राम्रो छ । निष्क्रिय कर्जा पत्याउनै नसकिने गरि तल छ । राम्रोसँग निरिक्षण भएको छ, त्यसकारण हामीले पत्याएका छौं ।
अहिले १२ अर्ब भन्दा कम पुँजीका बैंक त पाउनै छोडिएछ । कुनै बेला थियो सिंगो वित्तिय क्षेत्रको पुँजी जोड्दा पनि १२ अर्ब पुग्ने अवस्था थिएन् । म राष्ट्र बैंकमा हुँदा मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बनाउँथे । त्यतिबेला सबैं बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजी जोड्दा पनि १२ अर्ब देख्दैनथेँ । अहिले एउटै बैंक १२ अर्बका भए । कृषि विकास बैंक नै १५ अर्बको भएछ ।
अब कुरा उठ्छ, १५ अर्ब पुँजी भएको बैंकले १५ प्रतिशत मात्रै मुनाफा बाढ्नु पर्यो भने पनि २ अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाउनुपर्ने रहेछ । अनि बैंकको नाफा २ अर्ब नाघेपछि व्यवसायी साथीहरुको आँखा लाग्ने रहेछ । ओहो २।२ अर्ब नाफा कमाउने ? ३।३ अर्ब नाफा ? ४।४ अर्ब नाफा कमाउने भनेर हुर्मत लिने काम हुन्छ । बैंकहरुले त्यति नाफा कमाउन कति पुँजी लगाएका छन् भन्ने चाँही हेर्नु पर्दैन् ? पुँजीको प्रतिफल दरबाट पो हिसाब गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ५ अर्ब नाफा गर्यो । झट्ट सुन्दा पाँच अर्ब धेरै भयो जस्तो हुन्छ । तर २५ अर्ब पुँजी लिएर पाँच अर्ब नाफा गर्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? जम्मा २० प्रतिशत नाफा त हुने हो । कति न धेरै हो र । फेरी पनि २० प्रतिशत नाफा कमाउनै पर्छ भन्दिन म । १२।१५ प्रतिशत भएछ भने पनि तपाईहरुले चित्त बुझाउनु होला । अहिले व्यवसायीलाई अलिकति पैसा दिनु होला ।
अहिले रमाइलो भैरहेको छ, सिंहदरबार प्लाजामा काउलीहरु धेरै फल्थे । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु राम्रा फल्न थालेछन् । नत्र यहाँका संस्थाहरुबाट राज्यले खासै प्रतिफल लिन सकिरहेको थिएन तर अहिले राम्रो प्रतिफल पाउन थालेको छ । सरकारले पहिलो पटक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट नेपाल सरकारले आफुले गरेको लगानी वापत राम्रो प्रतिफल पाउँदैछ । सरकारी बैंकहरु निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धी बन्दैछन् ।
कर्मचारी संयन्त्र राम्रा भएका छन् । प्रविधिमा पहुँच पुगेको छ । कुनै बेला बैंकिंग सिस्टम रमाइलो थियो । युनियनमा दर्ता हुन २५ प्रतिशत कर्मचारी हुनुपर्ने थियो । तर दर्ता र मान्यता पाएका युनियन नै ६ वटा हुन्थे ।
कति वटा २५ जोडेपछि शतप्रतिशत हुन्छ भन्ने हिसाब पनि बिर्सेको थिएँ मैले त्यतिबेला । कृषि विकास बैंकमा त्यस्तो दिन पनि गएछ । दुई वटा मात्रै युनियन बनाएकामा कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद । यसरी नै काम हुँदै गयो भने सरकारी बैंकलाई अरु बैंक भन्दा राम्रो व्यवसायीक वातावरण सरकारले बनाउँछ । किनकी यी बैंकहरुको लाभांश पाउने आखिर सरकारले नै हो ।-कृषि विकास बैंकको ५३ औं बार्षिकोत्सव समारोहमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार
जोखिममा भारतीय अर्थतन्त्रः मुद्रा कोषको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीको आपत्ति
अर्थमन्त्री भन्छनः विश्व पुँजी बजारको नेतृत्व एसियाले गर्नुपर्छ
बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएका छैनन्, आलोचना नगर्नु: अर्थमन्त्री
उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाऔँः प्रचण्ड
भारतीय सेयर बजारमा उछाल आउँदा नेपालमा ओरालो किन ?